ထိုင်းလေဆိပ်မှ မြန်မာပြည်သို့အပြန်...ရန်ကုန်လေဆိပ်လဲရောက်ရော စိတ်မကောင်းစွာကြုံခဲ့ရသော ဥူးဇင်းလေးတစ်ပါး - MM Live News
မနေ့က ဂျာမနီနိုင်ငံ ဖရန့်ဖွတ်လေဆိပ်ကနေ ထိုင်းလေကြောင်းလိုင်း TG နှစ်ထပ်လေယဉ်ကြီးနဲ့ မြန်မာပြည်ပြန်အလာ၊ လေဆိပ်ထဲခနစောင့်နေတုန်း၊ လေယဉ်ဝန်ထမ်းတယောက်က မိမိထံလာပီး…
“မင့်ခုနံပါတ်ပြောင်းပေးလို့ရမလားတဲ့” Is it possible to change your seat number? လာပြောလာတယ်၊ မိမိအထင်တော့ ဘေးခုံက အမျိုးသမီးဖြစ်လို့နေမှာပေါ့၊ ok ရတယ် မင့်သဘောလို့၊ ခနနေတော့ လက်မှတ်အသစ်လာပြန်ပေးတယ် …
ဘေးက နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်က ဟ….မင့်ခုံနံပါတ်က VIP တဲ့။ အချိန်ကျတော့ ဂိတ်ကနေ လေယဉ်ပေါ်ခေါ်တော့ ရှေ့ဆုံးကနေ လက်အုပ်ချီပီး လာပင့်လာတယ်။
ထိုင်ခုံနံပါတ်ရှိတဲ့နေရာထိ ဝန်ထန်းတစ်ယောက်က လိုက်ပို့လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာဘဲ ထိုင်နေလိုက်တယ်။ လေယဉ်တာ ထွက်လာခဲ့တယ် ထိုင်ခုံ၃ခုံစလုံး တစ်ပါးထဲ။
ဘေးကလူတွေလဲ မိမိကိုသတိထားပီး ကြည့်နေကြတယ် ဘယ်လိုဘုန်းကြီးလဲပေါ့။ ကိုယ်ကတော့ ဘာကောင်မှမဟုတ်၊ ဒီလိုနဲ့ ထိုင်ခုံကချောင်နေတော့ လူတစ်ယောက်ထိုင်ဖို့ကြိုးစားတာ လေယဉ်မယ်တွေက အဲ့နေရာထိုင်လို့မရဘူးလို့ ပြောလိုက်တာ၊ ဒီတော့ မိမိကို ပိုအထင်ကြီးပေါ့…
လေယဉ်ပေါ်လဲ အရင်ဦးဆုံး အအေးမျိုးစုံလာကပ်လာတယ်၊ မနက်စောစောလဲ အဦးဆုံး နံနက်စာ လာကပ်လာတယ်၊ ဒီလိုနဲ့ ထိုင်းလေဆိပ်ထဲ ရောက်တော့ မြန်မာပြည်ပြန်ဖို့ မိမိရဲ့ဂိတ်နံပါတ်မှာ Check in counterဝင်တော့ သူများတွေထက်အရင်လာခေါ်လာပီး…
တန်းစီစရာမလို သိပ်အစစ်အဆေးမရှိ သာမန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ပါပဲ။ ရန်ကုန်ပြန်ဖို့ လေယဉ်ပေါ်တက်တော့လဲအရင်ဆုံးလာပင့်ပီး ရှေးဆုံးကနေပါပဲ။ရန်ကုန်လေဆိပ်လဲရောက်ရော ဇာတ်လမ်းကစတော့တာပါပဲ။
လက်အုပ်ချီမဲ့သူမရှိ သူများတွေနဲ့အတူ တန်းစီ၊ အစစ်အဆေးကလဲ ဟိုမေးဒီမေး Arrival visa အတွက် ဖောင်တွေဖြည့်ခိုင်းလို့ အချိန်အတော်ကြာသွားတယ်။
ပြောချင်တာက လေဆိပ်ကဝန်ထမ်းတွေ ထိုင်းနဲ့မြန်မာဆိုတာ ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံ ကိုးကွယ်မှုတွေတူညီပီး ယဉ်ကျေးမှုမတူညီကြပါလားလို့ စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ တွေးနေမိတော့တယ်။
မနကေ့ ဂြာမနီနိုငျငံ ဖရနျ့ဖှတျလဆေိပျကနေ ထိုငျးလကွေောငျးလိုငျး TG နှဈထပျလယေဉျကွီးနဲ့ မွနျမာပွညျပွနျအလာ၊ လဆေိပျထဲခနစောငျ့နတေုနျး၊ လယေဉျဝနျထမျးတယောကျက မိမိထံလာပီး…
“မငျ့ခုနံပါတျပွောငျးပေးလို့ရမလားတဲ့” Is it possible to change your seat number? လာပွောလာတယျ၊ မိမိအထငျတော့ ဘေးခုံက အမြိုးသမီးဖွဈလို့နမှောပေါ့၊ ok ရတယျ မငျ့သဘောလို့၊ ခနနတေော့ လကျမှတျအသဈလာပွနျပေးတယျ …
ဘေးက နိုငျငံခွားသားတဈယောကျက ဟ….မငျ့ခုံနံပါတျက VIP တဲ့။ အခြိနျကတြော့ ဂိတျကနေ လယေဉျပျေါချေါတော့ ရှဆေုံ့းကနေ လကျအုပျခြီပီး လာပငျ့လာတယျ။
ထိုငျခုံနံပါတျရှိတဲ့နရောထိ ဝနျထနျးတဈယောကျက လိုကျပို့လို့ သတျမှတျထားတဲ့နရောမှာဘဲ ထိုငျနလေိုကျတယျ။ လယေဉျတာ ထှကျလာခဲ့တယျ ထိုငျခုံ၃ခုံစလုံး တဈပါးထဲ။
ဘေးကလူတှလေဲ မိမိကိုသတိထားပီး ကွညျ့နကွေတယျ ဘယျလိုဘုနျးကွီးလဲပေါ့။ ကိုယျကတော့ ဘာကောငျမှမဟုတျ၊ ဒီလိုနဲ့ ထိုငျခုံကခြောငျနတေော့ လူတဈယောကျထိုငျဖို့ကွိုးစားတာ လယေဉျမယျတှကေ အဲ့နရောထိုငျလို့မရဘူးလို့ ပွောလိုကျတာ၊ ဒီတော့ မိမိကို ပိုအထငျကွီးပေါ့…
လယေဉျပျေါလဲ အရငျဦးဆုံး အအေးမြိုးစုံလာကပျလာတယျ၊ မနကျစောစောလဲ အဦးဆုံး နံနကျစာ လာကပျလာတယျ၊ ဒီလိုနဲ့ ထိုငျးလဆေိပျထဲ ရောကျတော့ မွနျမာပွညျပွနျဖို့ မိမိရဲ့ဂိတျနံပါတျမှာ Check in counterဝငျတော့ သူမြားတှထေကျအရငျလာချေါလာပီး…
တနျးစီစရာမလို သိပျအစဈအဆေးမရှိ သာမနျလုပျရိုးလုပျစဉျပါပဲ။ ရနျကုနျပွနျဖို့ လယေဉျပျေါတကျတော့လဲအရငျဆုံးလာပငျ့ပီး ရှေးဆုံးကနပေါပဲ။ရနျကုနျလဆေိပျလဲရောကျရော ဇာတျလမျးကစတော့တာပါပဲ။
လကျအုပျခြီမဲ့သူမရှိ သူမြားတှနေဲ့အတူ တနျးစီ၊ အစဈအဆေးကလဲ ဟိုမေးဒီမေး Arrival visa အတှကျ ဖောငျတှဖွေညျ့ခိုငျးလို့ အခြိနျအတျောကွာသှားတယျ။
ပွောခငျြတာက လဆေိပျကဝနျထမျးတှေ ထိုငျးနဲ့မွနျမာဆိုတာ ဗုဒ်ဓဘာသာနိုငျငံ ကိုးကှယျမှုတှတေူညီပီး ယဉျကြေးမှုမတူညီကွပါလားလို့ စိတျမကောငျးစှာနဲ့ တှေးနမေိတော့တယျ။
February 18, 2019 MM Live News
“သံဃ ဿ ဒမေ”လို့ ပွောလှူတဲ့ အလှူရှငျမြားသိစရေနျ…
October 26, 2018 MM Live News